Igumbi lokulala 23
U-Nina Ungumbungazi ovelele
Ifulethi eliyingqayizivele kwenye yezindlu ezinhle kakhulu zokuhlala e-Bydgoskie Przedmieście, eseduze neDolobha Elidala eToruń.
Ifulethi lisendaweni ehlala abantu (isitezi esiphezulu), uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka enhliziyweni yeDolobha Elidala. Indawo ekahle yabantu abafuna ukuthula nokuthula ngemva kosuku olugcwele izindawo ezikhangayo zedolobha.
Ikhishi elinezinto ezidingekayo: isiqandisi, umshini wokugeza izitsha, ihobhu yokungeniswa nohhavini kanye namapuleti, izinkomishi, izibuko zewayini nobunye utshwala, amabhodwe, ipani lokuthosa nezinto zokusika. Okunye okutholakalayo: ikhofi, itiye, ushukela nezinongo.
Igumbi lokugezela elineshawa, isomisi sezinwele, amathawula, iphepha lasendlini yangasese nensipho.
Ifulethi lilungele imindeni enezingane. Umbhede wokuhamba, imidlalo yebhodi, amabhlogo namakhasi ombala ayatholakala.
* Ifulethi alibhenywa.
4.95 ·65 okushiwo abanye
I-Bydgoskie Przedmieście iyisifunda saseToruń esitholakala entshonalanga yeDolobha Elidala, ehlukaniswe yibhande lepaki. Indlu yokuqashisa yakhiwa ngeminyaka ye-1912-1923 ngesitayela se-Art Nouveau. Imizuzu emi-5 uhamba ngezinyawo ukusuka enkabeni yedolobha.
Ngingumakhelwane oqondile - ngizokujabulela ukuphendula imibuzo yakho futhi ngikunikeze ulwazi mayelana nezindawo ezithakazelisayo e-Toruń.
UNina Ungumbungazi ovelele